Izindaba - 3D 3D wall wall (2)
Ukuqoshwa Kwensimbi Yensimbi
Insimbi Wall Clock
Ubuciko bodonga lwensimbi lwe-3D (2)
Ubuciko bodonga lwensimbi ye-aluminium Iya ngokuya ithandwa kakhulu, futhi abantu abaningi banquma ukuthuthukisa igumbi labo lokudlela, amagumbi okuhlala, njll. ngesethi eyodwa yomdwebo kawoyela wensimbi.
Awukwazi ngisho nokucabanga ukuthi zingaki izinto ezipholile ezingenziwa nge-aluminium. Kungaba umhlobiso omncane noma ubuciko bodonga obukhulu, obumboza lonke udonga. Ngaphezu kwalokho, izinto ze-aluminium zingamathuluzi asezindaweni zonke zokuhlobisa udonga njengoba zilungele cishe noma iliphi igumbi kanye nanoma iluphi uhlelo lombala. Kupholile impela ukuba nakhoUbuciko bensimbi yensimbi ye-3Dodongeni olwenziwe nge-aluminium emsulwa, ngoba ibukeka icwebezela futhi uma yenziwe kahle. Ingcezu yobuciko odongeni ingashintsha ngokuphelele umoya nomoya osegumbini ohlela ukukubeka lokhu.
Esihlinzekweni sethu, uzothola konke okudingayo, izinhlobo ezahlukahlukene ze- Ubuciko be-3D metalwall namaphethini amaningana, ngakho-ke wonke umuntu uzothola okuthile okulingana kahle kakhulu.
Yonke imisebenzi yethu yobuciko bensimbi yensimbi kulula ukuyifaka futhi ihlala isikhathi eside kakhulu. into enhle kakhulu ukuthi zilingana ngokuphelele kunoma iliphi igumbi olifunayo.Bangeza isitayela esifanele esifana nomoya wakho noma nomklamo owuthandayo. Kusukela, usuku nosuku insimbi odongeni art iya ngokuya ithandwa kakhulu, ungachithi isikhathi, futhi usendleleni ukhetha ezinye kuwebhusayithi yethu.
I-Handsome home Decor ingumkhiqizi wokuqala oyingcweti womdwebo kawoyela we-3D wensimbi eChina onekhwalithi engcono kakhulu ngaso sonke isikhathi.Ungavele usithembe futhi ukholwe ukuthi imidwebo yethu eyingqayizivele neyakhayo ingakulethela impumelelo enkulu!